ओठबाट थाहा हुन्छ युवतिको यौनिको आकार ?? - Samachar Post Dainik
ओठबाट थाहा हुन्छ युवतिको यौनिको आकार ??
वी’र्य र शु’क्रकीट फरक कुरा हुन् । वी’र्यमै अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि हुन्छन् । महिलाको डि’म्बसँग शु’क्रकीटको मिलन सन्तान उत्पत्तिका लागि आवश्यक हुन्छ ।
सन्तानको उत्पत्ति प्रमुख रूपमा पुरुषबाट निस्कने शु’क्रकीट र स्त्रीमा विकसित भएका डि’म्बको मिलन बाट हुन्छ । यौ’नसम्पर्कका बेला पुरुषको वी’र्य स्ल’खलन हुँदा वी’र्य यो’निको पछिल्तिरको भागमा राखिन्छ । वी’र्यमा भएका करोडौं शुक्र’कीटमध्ये केही पा’ठेघरको मुख हुँदै डि’म्बवाहिनी नलीमा पुग्छन् ।
त्यहाँ परिपक्व भएको डि’म्बसँग असंख्य शु’क्रकीटमध्ये एकको मात्र मिलन हुन्छ । यसरी मिलन हुने प्रक्रियालाई निषेचन भनिन्छ । यदि भित्री भागमा भएको छ भने जति नै धेरै मात्रामा वी’र्य बाहिर निस्किए जस्तो लागे पनि पा’ठेघरको मुखसम्म पर्याप्त शु’क्रकीट पुग्छन् । सामान्यतस् यसरी वी’र्य बाहिर निस्कनु ग’र्भधारण नहुनुको कारण बन्दैन ।
परिवार नियोजनको खाने चक्कीले महिलाको वजन बढ्ने कुरा गरिन्छ तर यो विरलै मात्र हुन्छ । सामान्यतस् व्यक्तिको वजन कि त शरीरमा बोसोयुक्त तन्तु जम्मा भएर बढ्छ, कि त तरल पदार्थ जम्मा भएर ।
नेपालमा सहज उपलब्ध नभए पनि स्पन्ज वा डायफ्रामजस्ता साधनले पनि वी’र्यमा भएका शु’क्रकीटसमेतलाई महिलाको पा’ठेघरको मु’खभित्र प’स्न दिँदैनन् ।
अन्य गर्भनिरोधको उपाय अपनाउँदा त्यसले वी’र्य स्ख’लनको प्रक्रियालाई प्रभावित गर्दैन । पुरुषले ब’न्ध्याकरण गर्दा पनि वी’र्य स्ख’लन हुन्छ नै, फरक यत्ति हो कि उक्त वी’र्यमा शु’क्रकीट हुँदैन । वी’र्य बाहिर ननिस्किए मोटाइन्छ रु वीर्यमा भएका शु’क्रकीटमा हुने प्रज’नन क्षमताका कारण त्यसले विशेष स्थान पाएको छ ।
अ’ण्डकोषमा बनेका शु’क्रकीट पनि यही वी’र्य थैलीमा आएर बसेका हुन्छन् र रसका साथसाथै बाहिर निस्कन्छ । एक चियाचम्चा वी’र्यमा यस्तै ५ देखि ७ क्यालोरी हुन्छ । तुलनाका लागि एक चियाचम्चा घ्यूमा १ सय १२ क्यालोरी हुन्छ । त्यसैले निलिएको अवस्थामा पनि यो पोषणका दृष्टिले महत्वपूर्ण हुँदैन ।
फेरि यो कुरा यो’निमा वी’र्य स्ख’लन भएको स्थितिमा पाइने होइन । त्यसकारण वी’र्य यो’निबाट ननिस्किएको कारणले मोटाइदैन्।
प्रकाशित मिति २७ आश्विन २०७८, बुधबार १४:४२